Kyrgyzstana : Fotoana Iray Mihisatra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Janoary 2018 11:07 GMT
Ny volana May mazàna dia fiavian'ny fotoam-pialantsasatra ao Kyrgyzstan. Fetin'ny asa ny 1 May, ny 5 May andron'ny Lalam-panorenana ary ny 9 May mankalaza ny Andron'ny Fandresena i Kyrgyzstan. Amin'ireo fotoana ireo no toa milamina sy mihisatra ny fiainan'ireo Kyrgyzstan.
Ny 1 May, ny antoko kaominista no nanokatra ny famoriambahoaka fohy tao amin'ny Kianjan'i Bishkek. Maro be ireo olona nitondra ny sarin'i Lenin sy ny sainam-pirenen'i Sovietika taloha. Fihetsiketsehana tena hafahafa ilay izy satria nanangana tsangan'olona ahitàna ny sarin'ilay filoham-pirenena Amerikana George Bush ihany koa ny Kaominista nandritra ilay famoriambahoaka.
Lvenks, mpampiasaa LJ, dia niantso [ru] io fihetsiketsehana io ho “Diaben'ny olona adala” .
Esterinna nilaza [ru] :
Tsy mino ny masoko. Tena marina ve fa misy olona any ho any mitazona ny sarin'i Lenin ?
Mpikambana ao amin'ny antoko kaominista, Sergei Kozhemjakin aka kojemyakin, nazava ny antony [ru] nananganan'izy ireo ny tsangan'olona ahitàna ny sarin'i George Bush, filoham-pirenena Amerikana.
“Io tsangan'olona misy ny sarin'i George Bush io dia mariky ny herin'ilay Kapitalista lehibe – Etazonia. Ny Fetin'ny Asa na ny Fetin'ny fiarovana ny zon'ny mpiasa no andro tsara indrindra ihomehezana ny Kapitalisma, satria ny Kapitalisma no fahavalo voalohany ho an'ny mpiasa “.
Toy ny hoe ireo manampahefana irery ihany no nakalaza ny Andron'ny Lalam-panorenana, satria tsy nisy Kyrgyz blaogera niresaka mikasika io andro io mihitsy.
Kanefa nisy fiantombohana fifaninanana koa tao amin'ny AFC Challenge Cup ny 5 May ary io hetsika io no nahaliana kokoa. Nahazo sary tsara be tamin'ilay lalao ilay blaogera Azzzik.
Nanao fanamarihana mikasika [ru] ilay lalao nifanandrinan'i Kyrgyzstana sy Afghanistana i Bekulia :
“Tena nampiseho tsara ny zavanitranga tamin'ilay lalao ilay sary. Mahatsapa ho toy ny nanatrika ilay lalao tany mihitsy ny tenako. Nalahelo mafy an'ireo ekipantsika ireo aho ; tena naniry mafy ny hibata fandresena mantsy izy ireo “.
Nandritra io fotoam-pialantsasatra io ilay Praiminisitra teo aloha Felix Kulov no voatondro ho Filoha mpitantana ilay tetikasa mikasika ny fampivoarana ny loharanon'angovo madinika sy salantsalany ao Kyrgyzstana.
Namoaka tsoakevitra avy hatrany ireo mpampiasa mana afironana politika ao amin'ny Diesel Forum .
Hoy i Bekson hoe [ru] :
“Tokony ho an'ny Departemantan'ny Ministeran'ny Angovo io tetikasa io. Inona no atao mba hamokatra tetikasa misimisy kokoa ireo manampahefana, sampan'asa sy sampan-draharaha ?”
Seraf nieritreritra fa [ru] :
“Tobim-pamatsiana angovo azo avy amin'ny rano faran'izay kely indrindra no hatsangan-dry zareo ireo. Nefa vao mainka hihalafo ary tsy hanamora ny fahabangana amin'ny tsena anatiny izany. Ny zavatra hany tsara anatin'io dia ireo toerana misy ilay asa”.
Ny Andro'ny Fandresena, blaogera maro no nandefa ny fiarahabàna ho an'ireo bekotro maro holatra tamin'ny ady.
911 steroids nilaza hoe [ru]
“Mihevitra aho fa io no hany fotoam-pialantsasatra mampifanakaiky sy mahatsara fanahy antsika tsirairay. Arahabaina ianareo, ry bekotro maro holatra!”
Navoaka tany amin'ny neweurasia ihany koa..